नेपाली कांग्रेसलाई बचाउने हो भने नयाँ पुस्ता अघि सर्नैपर्छ – Nepal Japan
नेपाली समय : 12:14:29
जापानी समय : 03:29:29
20 November, 2018 16:09 | राजनीति | comments | 22200 Views
मुलुकको सबभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस संक्रमण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । देशमा भएका सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको विगतको इतिहास वर्तमानमा स्खलित भएको छ र यस्तै अवस्था रहने हो भने यसको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
लामो समयदेखि नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले जन्माएको गुटबन्दीका कारण तीनवटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसंग पराजित भयो । अर्थात् कांग्रेसले भोट त पायो तर त्यो भोट अरुलाई उछिन्न काफी भएन । अहिले कांग्रेसभित्र यसैको समीक्षा हुने क्रममा छ– महासमिति बैठक मार्फत ।
कुनै पनि राजनीतिक दल कमजोर हुने र कुनै दल चाहिनेभन्दा शक्तिशाली हुनु प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि राम्रो मानिंदैन । अहिले त्यस्तै भैरहेको छ । चुनावमा पार्टी किन हार्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने नेताहरुले एकले अर्कोलाई दोष दिइरहेका छन् । समस्या यहीबाट उत्पन्न हो । उम्मेदवार कांग्रेसको नभएर गुटको मात्र बन्न पुग्दा चाहिने जति सहयोग भएन । सरकारमा बसेर निर्वाचन गराएको कांग्रेसले यति लाजमर्दो नतिजा ल्याउने कल्पना कसैले पनि गरेका थिएनन् । तर आपसी सहयोग र गुटबन्दीका कारणा कांग्रेस थलापर्यो ।
सरकार असफल हुनु र सरकारले मनलाग्दी गर्नुमा उसको दम्भ जति जिम्मेवार छ प्रमुख पतिपक्षी दलको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सरकार निरन्तर संवादमा रहेर गलत र सही कुराको समीक्षा गर्न कांग्रेसलाई कसले रोक्यो ? सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिकामा बोलेर वा लेखेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नेताहरु तयार हुनुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण पनि बुढो पुस्तामा हैन नयाँ पुस्तामा हुनुपर्छ, जोसंग क्षमता, दक्षता र काम गर्ने जाँगर छ ।
महासमिति बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलाई आगामी महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नेछ । के यसबीचमा पार्टीलाई शुद्धिकरण अभियानतर्फ नेताहरु एकढिक्का भएर लैजान्छन् कि गुटबन्दीमा केन्द्रित भएर नेतृत्व हत्याउने खेलमा लाग्छन् ? कांग्रेसको भविष्य यसैमा टिकेको छ । समग्रमा भन्दा कांग्रेसको गौरबशाली इतिहास जोगाएर मुलुकको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई मजबुत पार्ने जिम्मा अब युवा पुस्ताले लिनैपर्छ । यसले मात्रै कांग्रेस टिक्नेछ ।
(प्रस्तुत विचार युगसम्वाद साप्ताहिबाट साभार गरिएको हो)
नेपाली कांग्रेसमा गुट उपगुट नभएको निधिको दावी